သတိထားစေချင်သော Tag များ ( Henry Aung ) — PALNet
သတိထားစေချင်သော Tag များ ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယခုစာစုမှာ ကျွန်တော်တို့ Blogging လုပ် post တင်ရင်း ဝင်ငွေရှာ ဖွေနေသူတို့ သိသင့်သိထိုက်သည် ထင်သော ကြောင့် ကျွန်တော်သိသလောက်ဝေမျှပေးရခြင်းသာ ဖြစ်ပါ။ ပထမဆုံး Hive Blog ဖြင့် စလိုက်ကြရအောင် ။ Hive blog တွင်တော့ သင်ရေးသားနေသော အကြောင်းအရာများအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Tag များ ချထားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ခရီးသွားသည့် အကြောင်း ရေးမည်ဆိုလျင် မြန်မာစာဖြင့် ရေးသည့် အတွက် Myanmar tag ကို ထည့်ပေးရမည် ဖြစ်သလို ခရီးသွားသည့် အကြောင်း ဖြစ်သည့် အတွက် Traveling / အတွေ့အကြုံ ဝေမျှသည့် အတွက် Knowledge / sharing စသည် ဖြင့် ထည့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ ခရီးသွားရာတွင် ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်ပါ လျင် Funny ဆိုသော tag အပို ထည့် ပေးနိုင်သလို အစားအသောက် အကြောင်း များပါလျင် Food ဟူသော tag များ ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ Tag တွဲထည့်ပေးရခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိ ဆောင်းပါး ၊ စာစု ၊ post သည် ခရီးသွားခြင်း နှင့် ဆိုင်သလို ၊ ရယ်မောပျော်ရွှင်စရာ နှင့် အစားအသောက် အကြောင်း ၊ ဗဟုသုတရစရာ အကြောင်းများ ပါဝင်ကြောင်း အသိပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ တစုံတယောက်က Hive blockchain တွင် Myanmar / funny / traveling ဟူ၍ ရိုက်ရှာလိုက်လျင် မိမိ ဆောင်းပါးအား မြင်တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်သလို ၊ Myanmar / travel / food / knowledge ဟူ၍ ရိုက်ရှာကြည့်လျင်လည်း မိမိဆောင်းပါးအား တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများမှာ ထို ရေးပြထားသော Tag များ၏ အကြောင်းအရာများ အောက်တွင် ရောက်ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် ခရီးသွားသည့် အကြောင်းအရာ ရေးသားထားသော်လည် Tag တွဲသည့်အခါ Cryptocurrency ဟူသော tag တလုံး အပိုထည့်လိုက်လျင် မိမိခရီးသွားဆောင်းပါးသည် Cryptocurrency tag အောက်တွင် သွား၍ ပေါ်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် Cryptocurrency အကြောင်းသိလိုသူတို့က မိမိ ဆောင်းပါးအား ဖတ်မိလျင် Cryptocurrency အကြောင်းလည်း တခုမှမပါ ၊ ခရီးသွား ဆောင်းပါး ဖြစ်၍ ဖတ်ရသူမှာ အတော်ကသိကအောက်ဖြစ်ကာ ဆောင်းပါးရေးသူ မိမိအားလည်း အထင်အမြင်သေးသွားပါလိမ့်မည်။ ယခု Hive platform မှ post တင်သည့် အကြောင်း အနည်းငယ် ဝေမျှပေးလိုပါသည်။
PeakD ရှိ Myanmar Community မှ Post တင်လျင် Include Also in my blog ဟူသော ခလုတ်ဖွင့်ထားလိုက်လျင် မိမိ ၏ Hive blog ပေါ်တွင်လည်း ပေါ်လာမည် ဖြစ်သလို Myanmar Community page တွင်လည်း ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် ၂ သီးစားခြင်း ၃ သီးစားခြင်းဟူသော ဝေါဟာရ အရ မိမိ တင်လိုက်သည် Post အား Palnet.io/ Leofinance.io / Neoxian.city အစရှိသော Platform များတွင် မိမိ post အားပေါ်စေရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ tag များ တွဲပေးရပါသည်။ ဤသည်ကို Cross posting ဟု ခေါ်ပါသည်။
ဤတွင် PAL နှင့် Neoxian မှာ ပြသနာ မရှိလှသော်လည်း Leofinance မှာ ပြသနာရှိပါသည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေ၏ post တွင် Leo ဟူသော tag သာတွဲလိုက်လျင် Loe Platform ရှိမိမိ blog တွင်မိမိ post သွားပေါ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် မိမိ Post အား leofinance ဟူသော tag တွဲလိုက်လျင် ပြသနာရှိလာပါတော့သည်။
ဤ Leofinance ဟူသော tag သည် Leofinance နှင့် cryptocurrency အကြောင်းရေးသားသော post များအတွက်သီးသန့် ဖြစ်သလို ဤ Leofinance tag အသုံးပြုလိုက်ခြင်းအတွက် ထို post သည် Leo platform အသင်းသားများ၏ စာမျက်နှာ ထက်သို့ ရောက်ရှိသွားရကာ ထို Post များအား အသင်းသားတို့က လိုအပ်သလို Upvote ပေးကြခြင်း ဖြင့် မူရင်းဆောင်းပါးရှင်အား အထောက်အပံ့ပေးကြပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် Leofinance အကြောင်း ဆောင်းပါး ကောင်းလျင်ကောင်းသလို Upvot ပေးပြီး စာရေသူအား Support ပေးကြပါသည်။ ဤသည်မှာ Leo platform တွင် စာရေးကောင်းသူတို့ Upvote မရမရှိ မိမိစာ ကောင်းလျင်ကောင်းသလောက် Upvot 50/100/ 150 စသည်ဖြင့်ရကြပါသည်။
ဤသည်မှာ ယခင် steemit နှင့် Hive platform တို့၏ အားနည်းချက်အား ပြုပြင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ steemit နှင်​့ Hive တွင် သင်မည်မျှ စာရေးကောင်းနေစေကာမူ သင့်တွင် Power အားကြီးသော သူငယ်ချင်းမရှိထားလျင် သင့် အခြေအနေသည် Upvote လိုက်တောင်းယူနေရမည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။
ဆိုတော့ ယခု Leofinance အသင်းသားတို့ ပြင်ဆင်ထားပုံမှာ တကယ်ပင် နေရာကျလှပါသည်။ သင်သာ စာရေးကောင်းဖို့ လိုပါသည်။ Upvote မရမှာ မပူရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများကလည်း Leo platform တွင် Leofinance tag အား အထူးသတိထားစေလိုပါသည်။
အကယ်၍ မိမိသည် Leofinance / cryptocurrency အကြောင်း မြန်မာစာဖြင့် ရေးသည် ဆိုအုံးတော့ အချက်ကျကျဖြင့် အများဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်စေရန် ရေးသားလျင် leofinance tag အား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုအချိန်အခါသည် Translation app များ ရှိလာပြီ ဖြစ်သလို Google translate ကလည်း မြန်မာယူနီကုဒ်အား အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဘာသာပြန်ဖြင့် ဖတ်ရသူတို့က မိမိ မည်သည့် အကြောင်း ရေးသားထားသည်ကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် မိမိဆောင်းပါးအား အင်္ဂလိပ်စာ ဖြင့်ရေးသားထာသည် ၊ leofinance tag လည်း အသုံးပြုထားသည် ဆိုလျင်တော့ အထူးသတိပေးချင်ပါသည်။
မြန်မာစာအား ဘာသာပြန်၍ မထော်မနန့် အင်္ဂလိပ်စာ ထွက်လာလျင် ဖတ်ရှုသူတို့က Google translate ၏ အားနည်းချက်ကြောင့်ဟု နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း အမှားမှား အယွင်းယွင်းသော အင်္ဂလိပ်စာများ အတွက်တော့ သူတို့ခွင့်လွတ်ကြမည်မဟုတ်ပါ။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က Introducing post အတွက် Leofinance tag သုံးသော်ကြောင့် မိမိတို့ Intro post မှာ Leo team ၏ promotion page သို့ ရောက်သွားသောကြောင့် လူသစ်များအား အားပေးသည့် အနေဖြင့် Vote များပေးလိုက်ကြပါသည်။
မိမိ၏ နောက်ထပ်တင်လိုက်မည့် Post အတွက်တော့ Leofinance tag အသုံးပြုလိုလျင် အထက်တွင် ကျွန်တော်ဖေါ်ပြထားသော အကြောင်းအရားများအား လိုက်နာရန်တော့လိုပါလိမ့်မည်။ မဟုတ်လျင် Leo promotion page သို့ တက်လာသော မိမိ post အတွက် အမြင်မကြည်သူတို့က Down Vote ပေးလိုက်လျင် မိမိအတွက် အလွန်နစ်နာပါသည်။
အချုပ်ဆိုရလျင် မိတ်ဆွေအနေဖြင့် Blogger လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း ၊ အခြားသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း ပိုက်ဆံရလျင် ပြီးရော ဆိုခြင်းထက် မိမိဘာလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟူသော စိတ်ထားနိုင်လျင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော်သိသလောက် ဝေမျှပေးရခြင်းသာ ဖြစ်၍ ကျွန်တော်လည်း Leo platform အား လေ့လာနေဆဲ အဆင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး အနေဖြင့် ပြောလိုသည်မှာ မိမိတို့ Cryptocurrency ရရှိရန် Blogging လုပ်ကြသူတို့သည် တရက် ၊ ၂ ရက် ၊ တလ ၊ တနှစ် နှင့် ပြီးသွားကြမည့်သူများ မဟုတ်ကြပါ။ ရေရှည် သွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ၅ ပြား ၊ ၁၀ ပြား သာရသည် ။ အချိန်အခါ ကောင်းလျင် ၅၀ ၊ ၁၀၀ လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ၅၀၀ ၊ ၁၀၀၀ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ အနာဂတ်သည် မိမိလက်ထဲတွင်သာရှိပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် အကောင်းဆုံး လျှောက်လှမ်းနေရန်သာလိုပါသည်။
Henry Aung (Kachin)
#myanmar #hive #blockchain #knowledge #sharing #palnet #neoxian #leo
myanmarkoko3months ago
အမှန်ပဲဗျာ Leofinance tag ကို ဖြစ်နိုင်လျှင်
မတွဲတာ အကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်။ Eလိုကလည်း မကျွမ်းတာက
တစ်ကြောင်း Crypto အ​ကြောင်းကလည်း လုံးစေ့ပက်စေ့
နားမလည်။ peakd ကနေရိုးရိုး tag leo ပဲ တွဲမယ်ဆိုရင်ရော ရမလား မသိဘူးနော်။
kachinhenry3months ago
အစ်ကိုလည်း PeakD ကနေ Leo tag ပဲတွဲတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Leo blog မှာတော့ upvote ရတာ နည်းတာပေါ့။
golden.future3months ago
ကျွန်တော် @golden.future အနေဖြင့်တော့ leofinance tag မတွဲဖူးဘူးဗျ။
leo tag ပဲ တွဲတင်ခဲ့ဖူးတာပါ။
ဒါလည်း ကိုဟင်နရီ မှ leo tag. တွဲလျှင် vote value
ဘယ်မျှ တက်ကြောင်း ပို့စ်တင် မျှဝေပြီး နောက်မှပါ။
ဟိုယခင် steemit မှာတုန်းက ဝယ်ထည့် mining လုပ်ဖူး
သော်လည်း crypto and Finance အကြောင်း မဟုတ်ရင်
Tag မတွဲရ ဆို၍ ပြန်ရောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Hive မှာ ကိုဟင် ဆီမှ vote ရပြီး leo tag တွဲ
ရသလား တွဲမိကြပြီး သတိပေး မခံရဘဲ ဘန်းခံ ထိသလို
leo နဲ့ leofinance ဘယ်ဟာ တွဲတွဲ မဆိုင်ရင်
မတွဲဖို့ လိုပါလိမ့်မည် ထင်တာပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ PeakD ကနေတင်တာ အများအားဖြင့် Leo tag ပဲတွဲဖြစ်တယ်။ Leo blog မှာ vote ရတာတော့နည်းတာပေါ့။ ဒါပေသိ Hive လိုပဲ ပြားရရ မူးရရ ပေါ့။
uthantzin3months ago
Leofinance tag တွဲရာတွင် အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြထားတာ အားလုံးအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်စေပြီး မှတ်သားစရာကောင်းလှပါတယ်။
ထပ်မံ၍ leo platform အတွက် သိသင့်သိထိုက်သော/လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများအား သိချင်ပါသေး၍ ဆက်လက်မျှဝေပေးစေချင်ပါသည်။
Goodlucky and goodhealty to you!
Leo platform အကြောင်းကတော့ လေ့လာနေဆဲပါပဲ။
htwegyi3months ago
ဗဟုသုတရပါတယ် သတိထားရမည့်အရာများကို သိရပါသည်။
ကိုယ့်အတွက် leo down vote မိထားသည့်အတွက်
PeakD ကနေ post တင် Leo tag တွဲလုပ်ကြည့်ပါ ဦးထွေး။
သိသမျှ မျှဝေပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူပါ
asterkame3months ago
တစ်ခေါက်leo tagတွဲမိတာလာမန့်သွားတယ်bro...crypto postတွေမှtagတွဲစေချင်တာနေမယ်....